XOG: Musharraxiin iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Beesha Daarood oo la saftay Xasan sheekh & Xaalka oo maraya.. | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
XOG: Musharraxiin iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Beesha Daarood oo la saftay Xasan sheekh & Xaalka oo maraya..
Odayaal iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Beesha Daarood oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa qeyb ka noqday Dadka wada Ololaha Xasan Sheekh ee uu ku haminayo in markale Talada Dalka uu hoggaamiyo afarta sano ee soo socota.
Saacadihii la soo dhaafay kulamo xasaasi ah ayaa Hoteelada Magaalada Muqdisho ku dhax maray Kooxda Damul jadiid iyo siyaasiyiintaas oo badi ku garab ahaa sida xogta aan ku helnay CC Sharma’arke & Cali Xaaji warsame oo ah musharraxiin iyaguna ka soo jeeda Beesha daarood.
Kooxda Damul Jadiid ayaa siyaasiyiinta Beesha Daarood ku qanciayay hadii ay u Ololeeyaan Xasan sheekh uuna dib ugu soo laabto Talada dalka in ay heli doonaan Xilal Muhiim ah sida in loo magacaabi doono wasiiro.
Xogata aan helnay ayaa sidoo kale waxaa lagu cadeeyay in Siyaasiyiintan oo deegaanada puntland si weyn looga garanayo lagana qiiymeeyo ay ku qanceen balan qaadka kooxda Damul-Jadiid isalmarkaana ay qeyb ka noqdeen Saraakiisha Ololaha Xasan wax kawada.
Waxaa durba soo baxeysa in Siyaasiyiintan oo heer sare ka gaaray siyaasada soomaaliya ay ku guuleysteen in ay Xeelad siyaasadeesan ay ku qanciyeen Musharraxiin ka soo jeeda Beesha Daarood kuwaas oo qeyb ka noqday Ololaha Xasan sheekh iyo koox diisa.
Arrimaha doorashada Madaxweynaha la xiriira ayaa hadda meel xasaasi ah Mareysa waxaana Kooxda Damul jadiid geed gaaban iyo mid dheer u korayaan sidii Talada dalka markale ay u xajisan la haayeen kuwaas oo qorsho walba oo isku day ah sameynaya.
8-Bishan ayaa la rajeynayaa in ay dhacdo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo 24 Musharrax ay u taagan yihiin qaar koodna la’aamin sanyahay in aysan la heyn rajo fiican balse ay ka leeyihiin dan gaar ah